‘निर्मलालाई न्याय माग्दै’ सिंहदरबार घेराउ, सुन्ला त सरकारले ?
मुख्य पृष्ठसमाचार‘निर्मलालाई न्याय माग्दै’ सिंहदरबार घेराउ, सुन्ला त सरकारले ?
गत साउन ११ गत बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै आज देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार घेराउ गरिएको छ । सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा आज ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण उपस्थिति भएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आज प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरेको क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । तर, सोही क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ठूलो संख्यामा भेला भएर धर्ना दिएका हुन् । सो क्षेत्रमा धर्ना दिन, अनसन बस्न वा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन ।
बिहान करिब ११ बजेदेखि स्थानीयले निर्मलाका लािग न्याय माग्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले निर्मलाका हत्यारा पक्रिन सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै चाँडोभन्दा चाँडो दोषी पक्राउ नगरे आन्दोलन थप चर्काउने बताएका छन् ।
निर्मलाको गत साउन ११ गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । उनको बलात्कार तथा हत्यामा को संलग्न थियो भन्ने हालसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन ।